Iimfihlo zeshishini leSalon: Iindlela ezili-10 zokuThengisa ezinokuSebenza ezinokuKhusela abaThengi abaNinzi | Martech Zone
Iimfihlo zeshishini leSalon: I-10 yeengcinga eziSebenzayo zokuThengisa ezinokuKhusela abaXhasi bakho ngakumbi
Lwesine, Matshi 14, 2019 NgoLwesihlanu, Matshi 15, 2019 USuzy Viola
IiSalon zityala imali eninzi kwindawo yabo, abasebenzi babo kunye neengcali, izixhobo zabo, kunye neemveliso zabo. Nangona kunjalo, inye into abahlala beyityeshela yokutyala imali kwimikhankaso yabo yentengiso. Abaxhasi banokuyifumana njani i-salon yakho emnandi ngenye indlela?
Nangona ukuthengisa kunokuba yinto ekhohlisayo ukuyilawula, isalawuleka, kwaye akukho mfuneko yokoyikisa. Zininzi izimvo zokuthengisa ezizanyiwe zavavanywa iisalon ezisebenza kakuhle ekutsaleni abathengi kunye nokuphucula ukugcinwa kwabathengi.
Ukuba ungumnini we-salon osokolayo ujonge ukukhulisa iinkqubo zabo zokuthengisa, emva koko funda ukuze ufumane ukuba zeziphi izimvo zentengiso onokuzenza ukukhusela abathengi abaninzi.
Nika inkqubo yokujonga-umhlobo Enye indlela yokwandisa inani labathengi bakho kukusebenza kunye nabo sele unabo. Usenokuzibuza ukuba kanjani. Ewe, ngenkqubo yokuhambisa ngokuqinisekileyo. A Inkqubo yokudluliselwa yinkqubo ejolise kubathengi bakho bangoku. Olu luvo lokuthengisa lukhuthaza abathengi bakho ukuba bathumele umhlobo kwisalon yakho ngokubanika izaphulelo kuthumelo ngalunye olunempumelelo olufezekisiweyo. Into elungileyo malunga nenkqubo yokuhambisa kukuba abantu banokwenzeka ukuba benze ngokuthunyelwa kunakwifowuni ebandayo okanye i-imeyile evela kuwe. Xa ingcebiso ivela kumthombo othembekileyo kunye nomthombo osondeleyo, kunokwenzeka ukuba ufumane ingqalelo yabathengi abatsha. Abathengi ekubhekiswe kubo bafunyaniswe bethembekile kunabathengi abaqhelekileyo. Enye into edibeneyo kukuba bayakwamkela ngakumbi ukusebenzisa iimveliso kunye neenkonzo zakho.
Yenza intsebenziswano namanye amashishini -Izindlela ezininzi umntu anokuziqambela ngazo kwishishini labo. Enye indlela yokuba ngaphezulu kolu khuphiswano kukusebenzisana namanye amashishini. Amaxesha amaninzi siye sityeshele ukubanakho ukusebenzisana namanye amashishini kunye nendlela yokuqhuba ngakumbi ukugcwala kwengeniso kwishishini lakho. Njenge salon, ungasebenzisana namashishini amaninzi. Kuxhomekeka kwindawo ekuyo, ungasebenzisana namashishini akwicandelo lobuhle nawe. Umzekelo, unokunxibelelana nendawo oyithandayo yokuthanjiswa, okanye mhlawumbi ufuna ukusebenzisana nespa. Ngale ngcinga yokuthengisa, awunakucofa nje kubathengi bakho kodwa nakwelinye ishishini 'abathengi ngokunjalo. Iya kuba yimeko yokuphumelela kuwo omabini amashishini akho kunye nabathengi ngenxa yeedili abazifumanayo.
Nyusa ukunyuselwa kwesalon - Ngubani ongathandi isaphulelo? Kungenxa yoko le nto izaphulelo, ukuthengisa kunye nokunyuselwa kuhlala kusisikimu sokuthengisa esivivinywa ixesha esisebenza kakuhle kulo naliphi na ishishini. Ukunyuswa kwentengiso yakho kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Inokuba yeyokhenketho okokuqala, okanye mhlawumbi ngeeholide ezithile. Mhlawumbi unokuseta isaphulelo somhla wokuhlawula okanye ukuthengisa ngeveki. Ngokunyusa isalon, ungonyusa ukugcwala kwesalon yakho kwaye wandise ukubhukisha. Ewe kunjalo, xa unyuke ukubhukisha, amathuba okuba uvelise ukuthengisa ukuze ukwenziwa kwe-salon okwenziwe kakuhle nako kukonyuse ingeniso.
Sebenzisa intengiso yemidiya yoluntu Uluntu oluhle luyachuma kwimidiya yoluntu mva nje kwaye kubalulekile ukuba abanini beesalon bayisebenzise le nto. Soloko useta iakhawunti yemidiya yoluntu kwi-salon yakho ukwenza kube lula ukuba i-salon yakho ifunyanwe ngabathengi abanomdla ngakumbi. Nje ukuba ufumane iakhawunti esebenzayo kumaqonga eendaba ezentlalo ahlukeneyo, ungalibali ukuthengisa ishishini lakho. Guqula intengiso yakho kwaye izicwangciso zentengiso zentlalo ngokusekwe kwiqonga ngalinye lamava awenzelwe wena ngakumbi kubasebenzisi. Thatha ithuba lesiseko sokwabelana esisekwe kwifoto kwi-Instagram kunye nokuthumela ukubukeka okumangalisayo ukuze ufumane ingqalelo yabathengi abanomdla. Lungiselela ii-hashtag zakho kunye namagama aphambili ukuze ufumane uhlobo olufanelekileyo lokuqwalaselwa.
Qhagamshelwa ngakumbi ngentengiso ye-imeyile - Xa kuziwa kwintengiso yeshishini lakho kwi-intanethi, sukungakhathali ukuthengisa ishishini lakho ngamaphulo asekwe kwi-imeyile. Oku kwenzelwe abathengi abangalandeli iakhawunti yakho yemidiya yoluntu kodwa banike i-imeyile yabo kuwe. Isibonelelo sokusebenzisa iphulo lokuthengisa nge-imeyile kukuba ufumana iziphumo ezininzi ngexabiso eliphantsi. Unokusebenzisa ukuthengisa nge-imeyile ukwenza ezinye zeengcinga zentengiso ezikhankanywe ngaphambili. Umzekelo, ungathumela ii-imeyile ezinamakhonkco adlulisiweyo okuhambisa ukukhuthaza abathengi ukuba bathumele umhlobo ngesaphulelo. Unako kwakhona ukukhuthaza ukuthengisa okanye ukunyusa abathengi abangaziyo nge-imeyile yabo. Konke oku kunye nokunye kunokwenziwa nge-imeyile kwaye ungayilungiselela le nkqubo ngokusebenzisa ifayile ye Inkqubo yolawulo lwempahla yesalon.
Sebenzisa ukuhlela isoftware Sebenzisa isoftware ekucwangciseni ukubhukisha indawo kwi-salon yakho kunokunceda ekwenzeni inkqubo isebenze kwaye kube lula ngakumbi ukucwangcisela ukubakho kwabasebenzi bakho kunye nabaxhasi bakho. Zininzi izinto ezenzelwa abathengi kunye nabasebenzi ukuba basebenzise ithuba xa besebenzisa olu hlobo lwesoftware. Inqaku elinye elenza ukuba ukubhukisha indawo yokuqeshwa kube lula kukuhlaziywa kwekhalenda yexesha lokwenyani abathengi abanokuyijonga kwi-Intanethi. Oku kwenza ukuba kube lula kubathengi ukuba bathathe isigqibo xa befuna ukumisela ixesha lokuqeshwa kwabo kunyango abalukhethayo. Ngaphandle kwalonto, ukucwangcisa isoftware kunokukhumbuza abathengi bakho ngokuqeshwa abakubekele kwisalon yakho. Ukuba abathengi kufuneka barhoxise, ubuncinci awuyi kwaziswa ngomhla we. Oku kunokukuvumela ukuba ukhulule ixesha lokwamkela elinye idinga.
Joyina kwimisebenzi yasekuhlaleni Inye kuphela into yokuba iisalon ezininzi azisebenzisi luluntu lwasekhaya. Ezona salon zibalaseleyo zinolwalamano oluthile noluntu kuba, ngapha koko, kulapho uninzi lweshishini labo livela khona. Yiyo loo nto iisalon kufuneka zenze konke okusemandleni ukuzibandakanya kwimicimbi yendawo. Nokuba iminyhadala yeyeeholide okanye mhlawumbi yemiboniso yefashoni, ukubonisa nje inkxaso yakho kungenza igama leshishini lakho lisasazeke phaya kwaye lonyuse abathengi bakho.
Buyisela kuluntu lwakho -Ukuthetha ngokujoyina kwimisebenzi yasekuhlaleni, enye yeendlela zokwenza ubudlelwane nabahlali yile ukubuyisela eluntwini. Mhlawumbi cela oogunyaziwe bendawo ngeendlela onokuthi uluncede uluntu. Mhlawumbi ungabonelela ngeenwele zasimahla kwabo bangenamakhaya. Mhlawumbi unganceda ukuxhasa ngemali umsitho wesisa owenzekayo kwixa elizayo. Le yindlela efanelekileyo yokuzibandakanya kubathengi abatsha abanokufudumeza intliziyo.
Fumana i-salon yakho edweliswe kulawulo lwe-Intanethi -Iinkcukacha manani zamva nje zibonise ukuba uninzi lwabasebenzisi beselfowuni bafuna ishishini kwi-intanethi okanye imveliso kwi-intanethi ngaphambi kokundwendwela ivenkile. Kungenxa yoko le nto kufuneka ukuba wenze ukuba ishishini lakho libonakale kwaye lifumaneke kangangoko kunokwenzeka. Enye indlela yokwenza oko kukudwelisa ishishini lakho kwizikhombisi ezikwi-intanethi ezinje ngeYelp okanye kuShishino lukaGoogle. Ngale ndlela, abathengi abanomdla banokufumana ngokulula i-salon yakho kwaye bachonge iiyure zakho zokuvula kunye neenkonzo ozibonelelayo.
Sebenzisa intengiso ejonge ekujongeni kwakhona Nje ukuba umthengi atyelele indawo yakho, nokuba baphela ngokuthenga, kulula ukubenza baguquke kunabathengi abatsha abangazange banxibelelane nophawu lwakho konke konke. Ukujolisa kwezi ntlobo zabathengi, kungcono usebenzise intengiso yokujolisa kwakhona kwintengiso. Ukuba usandula ukuvelisa imveliso entsha okanye unyango, jonga uluhlu lwabathengi bangaphambili abanokubanomdla kubo kwaye bajolise kubo ngeentengiso zale mveliso / unyango.
Ukuthengisa isalon yakho akufuneki kuthethe ukuchitha imali eninzi kwiibhodi zezaziso okanye ukuthumela amaphetshana ajikeleze idolophu. Zininzi izimvo zentengiso ezinokuthi zenziwe namhlanje.
Imalunga nokunxibelelana nemakethi yakho ekujolise kuyo kunye nokuvula i-salon yakho ukuya kuluntu lwasekhaya. Sukulinda ixesha elide ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa ezi ndlela zokuthengisa ukuze uzenze zibe ngcono ngakumbi ngokukhawuleza.
tags: email Marketingimisebenzi yasekuhlaleniUkunyuswaukubuyisela kwakhonashowukuthengisa salonukuhlela isoftwareSocial Media Marketing
USuzy Viola yingcali yokuthengisa kwimidiya yoluntu kunye nomfoti. Uyakuthanda ukwabelana ngolwazi kunye nomdla wakhe kuye wonke umntu okhokelela ekubeni abe ngumbhali ozimeleyo. Kwaye oh! Ungumhambi naye.